Iqalisile Imidlalo Yomncintiswano Owenkezo eyecibuku Super Cup
Ntulikazi 02, 2021
Amaqembu omdlalo wenguqu akumncintiswano owenkezo eye Chibuku Super Cup aphindele enkundleni ngoLwesithathu ngemva kokumiswa okwesikhatshana nguhulumende, emizameni yakhe yokwenqabela ukumemetheka kwe Covid 19.
Iqembu ele Yadah linqobe ele Caps United nge 2 ka 1 emdlalweni obusenkundleni ye National Sports Stadium, eHarare ngoLwesithathu emini.
Limpumela itshiye iqembu le Yadah selihlezi endaweni yesibili engalaneni yemiklomelo, lilemiklomelo eyithoba minwemibili kuthi ele Caps United lona lisendaweni yesithathu lilemiklomelo eyisikhombisa.
Umdlalo obekumele ube phakathi kweqembu le ZPC Kariba lele Harare City udluliselwe phambili ngemva kokuba kutholakale kulabadlali kanye labaqeqetshi beqembu le ZPC Kariba abalomkhuhlane we Covid – 19.
NgoMgqibelo imhlaka 3 Ntulikazi, iqembu le Triangle lizadibana lele Ngezi Platinum Stars ngase Mandava ngehola letshumi lane ekuseni.
Kuthi emini ngoMgqibelo njalo iqembu le Black Rhinos lizadlala lele Tenax ngase Sakubva kuthi ngehola lesithathu emini iqembu le Chicken Inn lizangqikilana lele Bulawayo City enkundleni ye Barbourfields.
NgeSonto ekuseni ngehola letshumi lanye iqembu le FC Platinum lizadibana lele Whawha ngase Mandava kuthi ngehola lakuqala emini iqembu le Highlanders lizatshayana lele Bulawayo Chiefs eBarbourfields kuthi ngehola lesithathu emini iqembu le Cranborne Bullets lizadlala lele Manica Diamonds ngase Sakubva.